लमजुङ-चालू आवको चार महिनामै लमजुङबाट २४ वटा उजुरी अख्तियारमा पुगेको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराका अनुसार विभिन्न विषयमा २४ वटा उजुरी परेको हो ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराका अनुसार चालू आवको साउन १ देखि कात्तिक २५ सम्ममा उक्त उजुरी परेको हो । अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये १० वटाको फस्र्योट भइसकेको र १४ वटा उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयद्वारा सदरमुकाम बेंसीसहरमा आयोजित भ्रष्टचार निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो बारेमा जानकारी गराएको हो । भ्रष्टचारको प्रकृति, प्रवृत्ति र समग्र अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगका न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले सो तथ्यांकका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।
आयोगको पोखरा कार्यालयमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुरबाहेक १० जिल्लाका पाँच सय १७ उजुरी परेका छन् । अख्तियारमा उजुरी पर्ने जिल्लाअन्तर्गत लमजुङ सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा रहेको पाइएको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका अनुसार जिल्लाबाट परेका उजुरीमा स्थानीय तह, संघीय मामिला तथा प्रशासनतर्फ सातवटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबीनिवारणतर्फ एउटा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ तीनवटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ एउटा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ एउटा र भौतिक पूर्वाधारतर्फ एउटा उजुरी परेको छ ।
अख्तियारका अनुसार जिल्लाबाट जथाभावी निर्णय गरी भत्ता लिने, पेस्की लिने, रकम आफ्नो खातामा लिने, रकमको दुरुपयोग गर्ने, स्थानीय तह अनुदानमा अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता, पूर्वाधार निर्माणमा स्वीकृति र अनुमानविपरीत भुक्तानी, राजस्व छली, नियमित बैंक दाखिला नगर्ने जस्ता छन् । यस्तै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिमा अनियमितता, प्रश्नपत्र गोपनियता, शिक्षक दरबन्दीमा अनियमितता, दोहोरो सुविधालगायतका विषयमा पनि उजुरी परेको न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अख्तियारमा सबैभन्दा कम मनाङबाट एउटामात्रै उजुरी परेको छ भने दोस्रोमा मुस्ताङ छ । चालू आवमा मुस्ताङबाट जम्मा पाँच वटामात्रै उजुरी परेको पाइएको छ ।
यस्तै सबैभन्दा बढी उजुरी कास्कीबाट परेको अख्तियार आयोग कार्यालय पोखराले जनाएको छ । कास्कीबाट चालू आवको चार महिनामा मात्रै दुई सय २१ उजुरी परेको छ । सोबाहेक तनहुँबाट ५५, स्याङ्जाबाट ५२, पर्वतबाट ४९, म्याग्दीबाट ४०, बागलुङबाट ३६ र गोरखाबाट ३४ उजुरी परेको पाइएको छ ।
आयोगकको कार्यालय पोखराले पाँच सय १७ उजुरीमध्ये एक सय ८५ उजुरी फस्र्योट भइसकेको र तीन सय ३२ उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले सार्वजनिक पद धारणा गरेर भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि दोषी नउम्कने दाबी गरिन् । आयुक्त डा. थापा गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरी भ्रष्टचार गर्नेहरू अवकाश पछि पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै क्षणिक छलकपटले कालन्तरमा दुःख पाउने हुँदा बेलैमा सचेत हुन आग्रह गरेकी थिइन् ।